Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » IMizoram eNtsha: Indawo eKhuselekileyo yoKhenketho
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Safety • News Sustainability • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
UNks Rupinder Brar, Addl. UMlawuli-Jikelele, iCandelo loMphathiswa Wezokhenketho, uRhulumente wase-India, izolo uthe, "yinto ephambili kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezokhenketho ukuthatha uphuhliso lwezokhenketho kumantla mpuma ne-Mizoram."
Wongeze wathi kuninzi okunokwenziwa.
Ezokhenketho zingumvelisi omkhulu wengqesho, kwaye ziyakunceda ekugcineni nokukhusela lommandla, utshilo u-Brar.
Ukuthetha nge-webinar ku- "Ukuvula uKhenketho noKhenketho lweMizoram; Imiceli mngeni kunye nokuzilungiselela ”okuququzelelwe yi-Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), ngokuhlangeneyo neSebe lezoKhenketho, uRhulumente waseMizoram, UNks Brar wongeze wathi:“ Umphathiswa Wezokhenketho ucebise uMphathiswa Wezokundwendwela Kwaseburhulumenteni ukongeza ezinye iindlela. Ukuya kwiindawo eziphambili ngokubaluleka kwemali yesikhewu kwaye iMizoram izakuba yinxalenye yeso sicwangciso. Ngaphantsi kwenkqubo yeSwedesh Darshan, iiprojekthi ezininzi ziyenziwa ukuphucula iziseko zokhenketho. Phantsi kwePRASAD, uMphathiswa uvume iiprojekthi ezininzi ezichongiweyo ngokokubona ngezokundwendwela. ”
UNksk. Brar uqhubeke wathi ukuhlala emakhaya kunye nokwakha amandla ngamacandelo ekufuneka kusetyenzwe kuwo njengoko esongeza uninzi lwezoqoqosho nentlalo ngokubhekisele ekugcineni abasebenzi abanezakhono ukuze basebenze kwiidolophu zabo. “Kubakhenkethi, uhlobo lokufunda ngamava umntu alufumanayo ngokuhlala nosapho lwasekuhlaleni lukhulu kakhulu. Ukunabisa nokwazisa yinxalenye ebalulekileyo yesicwangciso sommandla womntla mpuma ukubonisa ubume obukhethekileyo bamazwe asibhozo emantla mpuma kunye nendlela yokuhlanganisa ngokungagungqiyo amava ohambo abakhenkethi kuwo onke amazwe, utshilo.
“Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho lizinikele ngokupheleleyo ekusebenziseni ukukhuthaza uKhenketho, uKhenketho kunye noKwamkelwa kweziNdwendwe kulo mmandla. UMphathiswa udale amaqela asebenzayo kunye nolu shishino, kwaye sicela i-FICCI isebenzisane noMphathiswa ukudala amaqela asebenza ngokuzinikela asebenzayo kwingingqi yempuma mpuma ukuze senze umahluko kwezi nyanga zimbalwa zizayo. Icandelo loMphathiswa kunye Ukhenketho lweMizoram Ndifuna ukusebenza ngokuzinikela ekuphuhliseni iindawo ekuyiwa kuzo kwaye ngesicwangciso-qhinga esifanayo kunokufikelelwa, ”utshilo.
UNks. Umceli mngeni wethu kwangoko kukuthatha indlela esebenzayo nenenkqubela phambili ekuvuleni kwakhona nasekuzuzeni ukuzithemba kwabantu ukuqala ngokuthe chu ukuhamba kwakhona. Kufuneka siqinisekise ukuba impilo kunye nokukhuseleka kwabahambi bethu kuhlala kuyinto ephambili kuthi. Kodwa kufuneka sikhumbule ukuba asinakukwazi ukuzivalela ngonaphakade ngenxa yokoyika intsholongwane ye-corona. Kufuneka sizame ngamandla ukulawula le meko kwaye sisebenzisane namahlakani anoluvo olufanayo kwicandelo kunye nabachaphazelekayo ukomeleza indawo yethu. ”
IMizoram yoKhenketho iceba ukuwafumana la mathuba kwaye besigxile kumacandelo okhuseleko kunye nozinzo. “Kutshanje sityhile uMgaqo-nkqubo woKhenketho oXanduva lwe-Mizoram ka-2020 ukuqhuba inkqubo yethu yokuvuselela nokubuyisela kwimeko yesiqhelo. Umbono wethu kukubeka iMizoram njengeyona ndawo ikhuselekileyo nezinzileyo kubakhenkethi kwilizwe lonke. Siceba ukuba kuluhlu lwamabhakethi lwabo bonke abahambi abayikhathaleleyo indalo kwaye bafuna iindlela zokuhamba ezikhuselekileyo nezizinzileyo, ”wongeze watsho uNks. Lalrinzuali.
Umnumzana Saitluanga, uMlawuli odibeneyo, iSebe lezoKhenketho, uRhulumente waseMizoram uthe urhulumente waseMizoram wenze le migaqo-nkqubo, imigaqo kunye nezikhokelo zilandelayo ukuze icandelo lezokhenketho kuRhulumente liphuhlise ngendlela elungileyo:
1. UMgaqo-nkqubo woKhenketho oXanduva lweMizoram 2020
2. Ubhaliso lweMizoram lweMigaqo yoRhwebo lwaBakhenkethi yowama-2020
3. Imigaqo yeMizoramu (yeAero-yezemidlalo) ye-2020
4. IMithetho eMizoram (yoMlambo iRafting) ka-2020
5. Izikhokelo zeendawo zokulala / iihostele eMizoram
6. Izikhokelo zeHomestays eMizoram
7. Izikhokelo zabaSebenzi boKhenketho eMizoram
8. Izikhokelo zomThengisi weNtengiso / uMmeli wezohambo eMizoram
9. Izikhokelo zabakhokeli babatyeleli eMizoram
10. Izikhokelo zoKhenketho lweeKharavani eMizoram
11. Izikhokelo zokwamkelwa koMbutho wabaBoneleli ngeeNkonzo zezoKhenketho eMizoram.
Umnumzana Ashish Kumar, uSihlalo oBambiseneyo, ukuhamba kwe-FICCI, iTeknoloji kunye neKomiti yeDijithali kunye neQabane eliLawulayo, iAgnitio Consulting, imodareyitha i-webinar kunye nengxoxo yephaneli "kumathuba ezokhenketho eMizoram kunye neenkqubo zokhuselo ezamkelwe ngabachaphazelekayo."
Umnumzana V. Lalengmawia, uMlawuli, iSebe lezoKhenketho, uRhulumente waseMizoram, uthe: “IAizawl sisixeko sanamhlanje kwaye siqhagamshelene kakuhle. IMizoram inemihlaba emininzi eluhlaza, amahlathi achumileyo, iindawo ezinkulu zoqalo, ezigcwele izilwanyana zasendle, iingxangxasi kunye nenkcubeko. Kukho ukungabikho kolwazi malunga nokukhenketha kweMizoram, kodwa urhulumente akachaphazeleka, akahloliswanga kwaye ufihliwe kukhenketho oluninzi olungenamkhawulo. Umbuso yiparadesi engakhange ifundwe, yiyo loo nto umxholo wethegi 'iMizoram eyintsomi; IParadesi yomntu wonke. ' Ulwazi lubalulekile ekukhuthazeni ukhenketho kurhulumente nakumajelo eendaba ezentlalo aluncedo kakhulu ekufikeleleni kubabukeli ngokubanzi. Itekhnoloji yeDijithali iza kuqhubeka nokudlala indima ebaluleke kakhulu ekukhuthazeni ukhenketho. ”
Isiseko sokhenketho seMizoram sithintelwe ngenxa yohlahlo-lwabiwo mali oluncinci olukwi-crore rupees ezisibhozo ukuya kwishumi. Ngenkxaso mali evela kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezokhenketho, i-DoNER kunye ne-NEC, uMizoram ukwazile ukwenza inkqubela phambili kuphuhliso kunye nokunyusa. Ngoncedo lwe-Ofisi yoMphathiswa Wezokhenketho, phantsi kweskimu se-Swadesh Darshan ezininzi iiprojekthi zobugcisa ziye zaphunyezwa njengoKhenketho lweGalufa kunye noKhenketho lwezeMpilo e-Thenzawl, e-Tourism Tourism eReiek, eMuthi, eHmuifang, kwezemidlalo e-Tuirial nase-Serchhip. . Isohlwayo se-Ofisi yoMphathiswa sokuphuhliswa kweziko lendibano iAizawl liza kuthatha urhulumente aye kwinqanaba elilandelayo lokhenketho lwe-MICE. Njengenxalenye yephulo lokhenketho elinoxanduva, ukhenketho lweMizoramu luqalise iiprojekthi zokulinga kwiilali ezimbini ezinobuhlobo kunye nozinzo.
UMnu Prashant Pitti, uMseki-mbi kunye noMlawuli oLawulayo, i-EaseMyTrip; UNks Vineeta Dixit, iNtloko-yoMgaqo-nkqubo woLuntu kunye noBudlelwane boRhulumente - Indiya Umzantsi Asia, iAirbnb; UMnu Joe RZ Thanga, uNobhala Jikelele, uMbutho wabaSebenzi boKhenketho eMizoram; UMnu Vanlalzarzova, uNobhala Jikelele, uMbutho weeArhente zokuHamba eMizoram, Mnu Himangshu Baruah, i-CEO, i-Finderbridge Tourism, Guwahati; kunye noMnu. Jayanta Das, uMphathi Jikelele weCluster eMntla-Mpuma, iDarjeeling kunye noMphathi Jikelele, uVivanta Guwahati nabo babelane ngezimvo zabo ngexesha lewebhu.